NNIPA a wɔwɔ wiase nyinaa nim Yehowa Adansefo sɛ wɔmfa wɔn ho nhyehyɛ amanyɔsɛm ne akodi biara mu. Wogye di paa sɛ ɛsɛ sɛ ‘wɔde wɔn nkrante yɛ nsɔw,’ na ɛnsɛ sɛ ‘wosua akodi bio.’ (Yesaia 2:4) Sɛ obi pɛ sɛ ɔkɔ sraadi a, wonsiw no kwan. Sɛ Ɔdansefo bi tiboa remma no kwan mma ɔmfa ne ho nhyɛ sraadi mu, nanso ɛyɛ mmara wɔ ne man mu sɛ ɛsɛ sɛ obiara kɔ sraadi nso ɛ? Saa asɛm yi bi na ɛtoo aberante bi a wɔfrɛ no Vahan Bayatyan.
Nea Ɛmaa Asɛm no Kopuee Europe Asɛnnibea Kunini Hɔ
Wɔwoo Vahan April 1983 wɔ Armenia. Ɔne n’abusuafo binom fii ase ne Yehowa Adansefo suaa Bible afe 1996, na bere a odii mfe 16 no, ɔbɔɔ asu. Bible a Vahan suae no ma obenyaa obu kɛse maa Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ, na emu biako ne akwankyerɛ a Yesu de maa n’akyidifo sɛ, ɛnsɛ sɛ wɔfa akode kɔ ɔko. (Mateo 26:52) Vahan bɔɔ asu no, ankyɛ koraa na asɛm kɛse bi sii a na ehia sɛ ɔkyerɛ baabi a ogyina.
Armenia mmara kyerɛ sɛ, sɛ ɔbarima biara di mfe 18 a, ɔpɛ oo, ɔmpɛ oo, ɔbɛkɔ sraadi. Sɛ obi bu saa mmara yi so a, wotumi de no to afiase bɛyɛ mfe abiɛsa. Ɛwom, na ɛnhaw Vahan sɛ ɔbɛyɛ biribi de aboa ne manfo, nanso esiane Bible a na wasua nti, na ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ biribiara ama ne tiboa abu no fɔ. Enti dɛn na ɔyɛe?
Afe 2001 na bere soe sɛ Vahan kɔ sraadi no, enti ofii ase kyerɛw nkrataa kɔmaa Armenia mpanyimfo. Ɔkae wɔ ne nkrataa no mu sɛ ɔrentumi mfa ne ho nhyɛ sraadi mu, efisɛ ɛne ne som mu gyidi nhyia na ɛbɛma ne tiboa abu no fɔ. Ɔsan kyerɛe sɛ, sɛ wɔma no adwuma foforo biara a ɛmfa sraadi ho a, ɔbɛyɛ ahyɛ anan.
Vahan Bayatyan, ogyina Nubarashen Afiase anim wɔ Armenia
Afe biako twaam, na saa bere no nyinaa na Vahan gu so rekyerɛw nkrataa kɔma mpanyimfo no sɛ wɔnte no ase. Nanso, September 2002 mu no, wɔkyeree Vahan bɔɔ no kwaadu sɛ waguan sraadi. Wobuu no fɔ sɛ wɔmfa no nto afiase afe ne fã. Nanso na aban lɔya no te nka sɛ asotwe no mu nyɛ den papa. Wodii asɛm no wiei no, ɔsram biako pɛ akyi no, aban lɔya no san de asɛm no kɔdan asɛnnibea foforo sɛ wommia asotwe no mu. N’asɛm ara ne sɛ, sɛ Vahan ka sɛ ne som nti ne tiboa mma no kwan sɛ ɔbɛkɔ sraadi a, “enni nnyinaso biara na ɛyɛ hu nso.” Asɛnnibea a wɔde asɛm no kɔdan wɔn no gye toom, na wɔde afe kaa Vahan ho.
Vahan nso de asɛm no kɔdan Armenia asɛnnibea kunini no. January 2003 mu no, Asɛnnibea Kunini no gyee asɛnnibea a wɔde asɛm no kɔdan wɔn no atemmu toom. Ntɛm pa ara na woyii Vahan kɔɔ afiase foforo; wɔde no kɔtoo awudifo ne wɔn a wɔtɔn nnubɔne ne mmonnaatofo mu.
Sɛnea Asɛm no Kɔɔ so Wɔ Europe Asɛnnibea Hɔ
Afe 2001 na Armenia bɛkaa Europe Bagua no ho. Enti sɛ wɔka obi asɛm wɔ Armenia na wante ne ho ase a, otumi de kɔdan Europe Asɛnnibea a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi Ho Nsɛm So no. Saa na Vahan yɛe. Asɛm a ɔde kɔtoo asɛnnibea no anim ne sɛ asotwe a wɔde maa no no tia Ahyɛde a ɛto so 9 a ɛwɔ Europe Asɛnnibea a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi Ho Nsɛm So mmara mu no. Ɔkae sɛ ahyɛde yi kyerɛ sɛ, sɛ obi tiboa bebu no fɔ wɔ sraadi ho a, ɔwɔ hokwan sɛ ɔtwe ne ho fi sraadi ho, enti Asɛnnibea no nhwɛ nka n’asɛm mma no. Nea na ɔrehwehwɛ no, na ebi nsii da.
October 27, 2009 no, Europe Asɛnnibea no buaa asɛm no. Asɛnnibea no kae sɛ mmara a ɛwɔ hɔ dedaw nti, tiboa ho asɛm a ɛwɔ Europe Bagua no Ahyɛde a ɛto so 9 mu no, obi rentumi nnyina so nka ne tiboa haw no nti, ɔbɛtwe ne ho afi sraadi ho.
Bayatyan ne ne yere Tsovinar, ne wɔn ba Vahe
Bere a wobuaa asɛm no, na wɔayi Vahan afi afiase dedaadaw ama waware mpo awo. Atemmu no anyɛ Vahan dɛ koraa. Afei de na ato adwennwene: Obegyaa asɛm no mu? Anaasɛ ɔde bɛkɔ Europe Asɛnnibea no Bagua Kɛse no anim? Ɔde asɛm no kɔdan Bagua Kɛse no. Esiane sɛ nsɛm mmiako mmiako bi pɛ na Bagua no di nti, Vahan ani gyei sɛ wɔpenee so sɛ wɔbɛsan ahwɛ n’asɛm no.
July 7, 2011 na Europe Asɛnnibea no Bagua Kɛse no buaa asɛm no wɔ Strasbourg, France. Baguafo 17 a wohyiae no, wɔn mu 16 gye toom sɛ Armeniafo atiatia Vahan Bayatyan fahodi so; obiako pɛ na ɔne wɔn anyɛ adwene. Bagua no kae sɛ bere a Vahan kae sɛ ne tiboa mma no kwan mma ɔnkɔ sraadi no, ɛyɛ mfomso sɛ wɔde no too afiase. Baguani biako pɛ a ɔne wɔn anyɛ adwene no, Armenia na ofi.
Bayatyan ne ne lɔyafo no wɔ Europe Asɛnnibea a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi Ho Nsɛm So, November 24, 2010
Dɛn na ɛma asɛm yi yɛ nwonwa? Nea enti a ɛyɛ nwonwa ne sɛ ebi nsii da wɔ Europe Asɛnnibea no abakɔsɛm mu sɛ wobegye atom sɛ Europe Bagua no Ahyɛde a ɛto so 9 no ma kwan sɛ obi tiboa nti, otumi twe ne ho fi sraadi ho. Nea asɛnnibea no kae no kyerɛ sɛ, aman a wɔwɔ ka-bi-ma-menka-bi amammu no, sɛ obi ka sɛ ne tiboa mma no kwan sɛ ɔnkɔ sraadi a, wɔrentumi mfa no nto afiase; wɔyɛ saa a, na wɔretiatia ne fahodi so.
Asɛm a asɛnnibea no ka faa Yehowa Adansefo gyinabea wɔ sraadi ho ne sɛ: “Enti asɛnnibea no abehu sɛ biribiara kyerɛ sɛ nea n’asɛm abɛtɔ gua no, ne som mu gyidi nti na ne tiboa mma no kwan sɛ ɔbɛkɔ sraadi; ne gyidi no nso nyɛ nnipa ani so de, na ɛmma kwan koraa sɛ ɔbɛkɔ sraadi.”
Nea Wɔyɛe Wɔ Gyinaesi no Ho
Bɛboro mfe 20 ni, Yehowa Adansefo bɛboro 450 a wɔn tiboa mma wɔn kwan mma wɔnkɔ sraadi na wɔabu wɔn fɔ wɔ Armenia. Bere a yɛreyɛ nhoma yi ho adwuma no, na mmerante 58 na wɔwɔ saa ɔman no mu a wɔda afiase esiane sɛ wɔn gyidi mma wɔn kwan sɛ wɔnkɔ sraadi nti. Saa nkurɔfo no mu baanum de, wodii Bayatyan asɛm a abɛyɛ sɛnnahɔ no wiei ansa na wɔde wɔn regu afiase. * Mmerante no mu biako de, ɔde krataa kɔmaa aban lɔya sɛ, kwaadu a ɔde abɔ no sɛ wadi mfomso sɛ ne tiboa a ebebu no fɔ nti wankɔ sraadi no, ontwa mu, nanso wampɛ ammua. Aban lɔya no nso kyerɛw kɔmaa no sɛ: “Bayatyan asɛm no ho atemmu a Europe Asɛnnibea no de too gua July 7, 2011 no, ɛmfa ne de no ho, efisɛ ɛda adi pefee sɛ ɛne asɛm yi nni hwee yɛ.”
Ɛyɛɛ dɛn na aban lɔya no kaa saa? Bere a wɔbɔɔ Vahan Bayatyan kwaadu no, na wonni nhyehyɛe biara a wɔde si sraadi ananmu. Seesei Armenia aban no kyerɛ sɛ afei de wɔahyɛ mmara bi a ɛkyerɛ sɛ, sɛ obi mpɛ sɛ ɔkɔ sraadi a, obetumi ayɛ adwuma foforo ahyɛ anan. Nanso adwuma a obi betumi ayɛ ahyɛ anan no nso wɔ asraafo nsam, enti akɔyɛ ne ho Kwasi kɔ na ogyina nkwantia.
Vahan Bayatyan ani agye sɛ wodii asɛm no maa no na abɛyɛ sɛnnahɔ. Seesei atemmu yi ama ada adi sɛ ɛnsɛ sɛ Armenia man no kɔ so tetee wɔn a wɔn gyidi nti wɔmpɛ sɛ wɔkɔ sraadi no na wɔde wɔn gu afiase.
Ɛnyɛ Yehowa Adansefo adwene ne sɛ wɔbɛyɛ ama ɔman bi asesa ne mmara. Nanso sɛnea aberantewa Vahan Bayatyan yɛe no, wɔbɔ mmɔden fa mmara kwan so bɔ wɔn fahodi ho ban na obiara antiatia so wɔ wɔn man mu. Adɛn nti na wɔyɛ saa? Efisɛ wɔpɛ sɛ wɔtena ase asomdwoe mu na wɔyɛ setie ma wɔn Kannifo Yesu Kristo mmara.
^ nky. 17 Wobuu wɔn mu baanu fɔ July 7, 2011, na saa da no ara nso na Europe asɛnnibea no buaa Bayatyan asɛm no.